Burma Partnership » Former Political Prisoners Society
Posts Tagged ‘Former Political Prisoners Society’ (12 found)
နိုဝင်ဘာ ၁ ၊ ၂၀၁၄ နေ့စွဲဖြင့် အစိုးရထုတ် သတင်းစာများတွင် ပါရှိသည့် ‘နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP)နှင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းများအဖွဲ့ (FPPS) တို့၏ တင်ပြမှုအပေါ် စိစစ်ချက်အရ အခြားပြစ်မှု ကျူးလွန်ခဲ့သူ ပြစ်ဒဏ်ကျခံဆဲ (၂၇)ဦး အမည်စာရင်း’ ထုတ်ပြန်ချက် အပေါ် သဘောထားကြေညာချက်
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP) နှင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်း များအဖွဲ့(FPPS) တို့သည် စတင်တည်ထောင်ချိန်မှစ၍ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား တစ်ဦးချင်းစီ၏ အမှုဖြစ်စဉ်များ၊ အမှုတွဲဖိုင်များ၊ စီရင်ချက် များကို ရနိုင်သမျှ လေ့လာစစ်ဆေး သုံးသပ်ပြီး၊ မိမိတို့ ဖွင့်ဆိုထားသည့်နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက်နှင့်အညီ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား စာရင်းကို ပြုစု ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ […]
November 3, 2014 • By Assistance Association for Political Prisoners, Former Political Prisoners Society • Tags: Assistance Association for Political Prisoners, Burma Government, Ceasefire Agreement, Former Political Prisoners Society, National Reconciliation, Peace Talks, Release of Political Prisoners • Read more ➤
AAPP-B and FPPS Joint Statement
The end of 2013 saw numerous government statements that convinced much of the outside world that all political activists had been freed from Burma’s jails. These statements not only served to undermine the plight of those political activists still in jail at the beginning of 2014, but also shifted focus away from the ongoing restrictions and harassments of political activists. In 2014, there have been 85 people charged under Article 18 of the Peaceful Assembly Law, Section 505 (b) of the Penal Code, Section 447, andanumber of other laws. AAPP currently recognizes at least 59 political prisoners detained across Burma […]
May 27, 2014 • By Assistance Association for Political Prisoners - Burma, Former Political Prisoners Society • Tags: Assistance Association for Political Prisoners - Burma, Former Political Prisoners Society, Political Prisoners, President Thein Sein • Read more ➤